परमेश्वरको कृपा र विश्वस्तता : NepalChurch.com
[ 1 ] February 1, 2013	| Resham Sunuwar
हरेक मानिसलाई परमेश्वरको कृपा र विश्वस्तताको खाँचो हुन्छ। मानिस आफैमा कमजोर र दुर्वल छ। मानिसको जीवनमा उतार-चढाव भईरहन्छन्। कतिचोटी मानिसको जीवनमा भएका कमजोरीहरुले, असफलताहरुले पिरोलिएर जीवनमा नैराश्यता अनि संर्घषमा मान्छे बाँचीरहेका हुन्छन्। यहाँ विलापको पुस्तक ३:२३ मा हरेक विहान परमेश्वरको कृपा नयाँ हुन्छ अनि परमेश्वरको विश्वस्तता महान छन् भनेर भनिएको छ। हरेक दिन परमेश्वरको कृपा र विश्वस्तता हाम्रो निम्ति अचम्मको छ। उहाँले नै हामीलाई वास्ता, प्रेम र सरोकार राख्नुहुन्छ। उहाँले जीवन जिउनलाई मद्धत र आशा दिनुहुन्छ।
“हरेक विहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। तपाईंको विश्वस्तता महान छन्।” विलाप ३:२३।
-हरेक विहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ।
-उहाँको विश्वस्तता महान छन्।
हरेक विहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ।
विलापको पुस्तक यर्मिया अगमवक्ताले लेखेका हुन् भनेर भनिएको छ। यर्मियाको जीवनचाहिं मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा असफल भएको देखिन्छ। उसले आफ्नो जीवनकालभरी परमेवरप्रति उत्तरदायी बन्नर् इस्राएलीहरुलाई चेतवानी दिईरहे। यद्यपि इस्राएलीहरुले उनको कुरा सुनेनन्। यसैको परिणामस्वरुप यिनीहरुमाथि वेवीलोनीहरु आएर इस्राएलीहहरुमाथि आक्रमण गरेर सम्पूर्ण इस्राएलको मन्दिर अनि त्यहाँको शहर अनि पर्खाल सबै नाश पारीदिए। यर्मिया एक दर्शक जस्तै त्यो उजाड स्थानको दृष्य देखेर मनभरी विलाप र दुःखको आँसु झारीरहेको कुरा आफैमा पिडादायी थियो। जब यर्मिया अगमवक्ताले यर्मियाको पुस्तक लेखे। उनको क्रन्दन अनि शोक यसमा प्रतिविम्वित भएको छ। नबुकदनेजरले यरुशलेमको नाश गरेका थिए। यरुशलेमका शत्रुहरुले ठट्टा र खिसीमा उडाएका थिए। नष्ट गरिएको यरुशलेमको खरानीको थुप्रोमा बसेर यर्मियाले यस विलापको पुस्तकलाई लेखेका थिए। उनको अनुहार उजाड थियो। उनका शब्दहरु अँध्याँरो रिसले भरिएका थिए। पूर्णरुपमा समस्या र दुःख अनि सानो मानवीय आशाको त्यान्द्रो बोकेर परमेश्वरतर्फ हेरी राखेका थिए।
आज हामीले पनि यही कुरा सिक्नु जरुरी छ कि हरेक विहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। कुनैदिन अथवा बेला बेला मात्रै परमेश्वरको कृपा नयाँ हुने होईन तर हरेक विहान यो नयाँ हुँदछ।हरेक विहान परमेश्वरको कृपा नयाँ हुँदछ अनि त्यो हाम्रो लागि निश्चय पनि असल कुरो हो। हरेक विहान परमेश्वरको कृपा हाम्रो लागि ताजा अनि नयाँ हुन्छ। यो हरेक विश्वासीहरुको लागि असल राम्रो कुरा हो। यर्मियाले विलापमा आशा लिएर बाँचेका छन्। हामी हरेक विहान परमेश्वरमा आशा लिएर बाँच्नु पर्दछ किनकि हाम्रो निम्ति हरेक विहान परमेश्वरको कृपा नयाँ हुँदछ। कसैले भनेका छन्, “हामी ४० दिन खानाबिना बाँच्न सक्दछौं, पानीविना असी दिन बाँच्न सक्दछौं, चारमिनेट हावाविना बाँच्न सक्दछौं तर केही सेकेण्ड मात्र आशाविना बाँच्न सक्दछौं।”
आज हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि हरेक दिनले यस पृथ्वीमा हामी रहनुको वास्ताविकता ल्याउँदछ। यो संसारमा मनिसहरु कतिजना मनमा चोट बोकेर बाँचीरहेका छन्, कतिजना अनिकालमा बाँचीरहेका छन्। कतिजना एक्लो बनेर बाँचीरहेका छन्। कतिजना रिस, तनाव, कुलत र रोग बिमार लगायतका अनगिन्ती समस्याहरुसँग मानिसहरु दिनहुँजसो संर्घष गरीरहन्छन्। यहाँ विलापको पुस्तकको लेखक यर्मिया अगमवक्ता पनि गहिरो प्रकारको दुःख पिडा अनि समस्याबाट गुज्रेर गईरहेका अवस्थामा उनले परमेश्वरको आशालाई पछयाईरहेका छन्। अनि भन्दछन् कि हरेक विहान उहाँको कृपा नयाँ हुँदछ। हरेक विहान तपाईको निम्ति कस्तो छ- हरेक विहान तपाईको निम्ति संर्घष दु:ख अनि पुरानै कुराले पछयाईरहेको छ कि? होईन आज हाम्रो निम्ति हरेक विहान परमेश्वरको कृपा नयाँ हुन्छ। हामी विहानै कसैलाई भेटदा गुड मर्निङ्ग भनेर भन्दछौं। असल विहान अथवा शुभ विहान भनेर अभिवादन गर्दछौं। हरेक विहान परमेश्वरको कृपा नयाँ हुँदछ र हाम्रो जीवनमा फेरी नयाँ नयाँ आशिषको कुराहरु उहाँले ल्याउनुहुन्छ। जव हामी प्रत्येक विहान उठदछौं यो कुराको याद हुनु जरुरी छ कि हाम्रो आज परमेश्वरले दिनुभएको नयाँ विहान हो। आजको दिन मेरो लागि आशिषमय दिन हो। सबै पुराना कुराहरु अब बाँकी छैनन। हिजोको समस्या, हिजोको दुःख, हिजोको चित्त दुःखाई, हिजोको रोग बिमार आज फेरी छैनन्। आज परमेश्वरमा नयाँ अनि ताजा दिन, अनि नयाँ विहान हाम्रो लागि दिईएको छ। आजको विहान नयाँ विहान हो कि चिन्ता फिक्री अनि समस्याहरुले बेरिएर जिउने दिन होईन। किनकि हरेक विहान परमेश्वरको कृपा हाम्रो लागि नयाँ हुन्छ। परमेश्वरको कृपाले भरिने समय हो।
हरेक विहान परमेश्वरको कृपा नयाँ हुन्छ भनेर यहाँ यर्मिया बताएका छन्। यो कृपा भनेको के हो? कृपा भनेको दया देखाउनु, माया गर्नु अनि निगाह गर्नु हो। हिब्रु शब्द racham को अर्थ कृपा जसलाई दया देखाउनु भनेर भनिएको छ। प्रेम गर्नु, गहिरो प्रेम देखाउनु, कृपा गर्नु, दया देखाउनु भन्ने हुन्छ। कृपाचाहिं परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र हो। कृपा भनेकोचाहिं व्यक्तिगत चरित्र हो जसले अरुको खाँचोमा सहायता गर्दछ। वाइवलीय अवधाराणमाचाहिं कृपा भनेको जहिले पनि अरुलाई तिनीहरुको खाँचोअनुसार मद्धत गर्नु तिनीहरुलाई दया देखाउनु भन्ने नै हो। यदि परमेश्वरले हामीलाई कृपा नदेखाउनुभएको भए हामी पापको बन्धनमा नै बस्ने थियौं। कृपा भनेको कसैलाई राम्रो अनि उत्तम बनाउने काम गर्नु हो। परमेश्वरले हामीलाई राम्रो र उत्तम बनाउने काम गर्नुहुन्छ। प्रत्येक दिन र प्रत्येक विहान यो काम उहाँले गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको कृपा देखाउनुहुन्छ। हरेक विहान यो नयाँ नयाँ तरिकाले आउँदछ। परमेश्वर हाम्रो भलाई चाहनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो असल कुरा सोच्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई मद्धत गर्न र दया देखाउन सँधै तयार हुनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेमचाहिं उहाँको कृपाद्धारा अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको हृदयचाहिं कृपाको फोहोरा हो। जसले हाम्रो निम्ति दया र क्षमादान दिनुहुन्छ। हामीले योग्य भएर धर्मी भएर अनि यसलाई कमाएर अथवा दाम तिरेर किनेर पाउने कुरा नभएर परमेश्वरले हामी पापी मानिसलाई प्रेम गरेर देखाउनुभएको उहाँको कृपा हो यो। उहाँको कृपाचाहिं असिमित छ। परमेश्वरको प्रेमको कारण हामी नाश भएका छनौं। उहाँको कृपा कहिल्यै पनि अन्त हुँदैन। उहाँको कृपा हरेक विहान नयाँ हुँदछन्। मानिसहरुले उहाँलाई घृणा गरे तापिन उहाँबाट टाढो गए तापनि अझै उहाँको कृपा देखाउनुहुन्छ। कृपा गर्नु अनि दया गर्नु भनेकोचाहिं केवल साहनुभूति देखाउनु मात्रै होईन, यसले क्रिया अथवा काम पनि गर्दछ । परमेश्वरले हामी पापी मानिसहरुको लागि आफ्नै एकलौटे पुत्र येशूलाई पठाएर क्रुसमा मर्न दिएर रगत वगाएर अनि हामीहरुको पाप क्षमा दिएर उहाँको कृपा र दया देखाउनुभयो। केवल साहनुभूति मात्रै देखाउनुभएन तर उहाँले आफ्नो कृपा देखाउनुभयो ।
यहाँ विलापको पुस्तकमा यर्मियाको शोकपूर्ण क्रन्दन छ। यो इस्राएलीहरुको पापको कारण दुःख, शोक, दुर्गति पिडाको बोझले थिचिएर निस्केका आवाज हो। यरुशलेम शहरको पतन हुँदा शोक उव्जिएको छ। शहरको विध्वंसबाट उम्केर बाँच्नेहरुलाई हप्काएको अनि शिक्षा दिएको अनि परमेश्वरमा आशा छ भनेर भनिएको छ। वास्तवमा परमेश्वरमा हरेक विहान नयाँ दिन र उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ भनेर भनिएको छ। हरेक विहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ भनेर जोड दिईएको छ। हरेक विहान हाम्रो लागि परमेश्वरको ताजापन आवश्यक हुन्छ। हरेक विहान परमेश्वर ताजा अभिषेक ताजा अगुवाई र ताजा छुवाईको खाँचो हुन्छ।हरेक विहान तपाईको जीवन कसरी शुरुवात गर्नुहुन्छ? त्यही कुराले तपाईको दिनभरीको यात्रालाई निर्धारण गर्दछ। पुरानो करार प्रस्थानको पुस्तक १६ अध्यायमा जब हामी हेर्र्छौ भनेर इस्राएली उजाडस्थानमा खाना नपाएको भनेर मोशा र हारुनलाई गनगन गरे। अनि परमेश्वरले मोशालाई इस्राएलीहरुलाई मन्ना र बट्टै चराको मासु दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। हरेक विहान ताजा मन्ना र हरेक बेलुका बट्टै चराको मासु परमेश्वरले तिनीहरुलाई दिनुभयो। हरेकले दिनभरीको लागि मात्रै मन्ना बटुल्न सक्थे। अर्कोदिनको लागिर् इ्रस्राएलीहरुले मन्ना बटुल्न सक्दैनथे। कोही कसैले एकदिन भन्दा बढीलाई मन्ना बटुलेमा कुहिने अनि किरा लाग्ने हुन्थ्यो। हरेक विहान ताजा मन्ना तिनीहरुले बटुल्नु पर्थ्यो। परमेश्वरले तिनीहरुलाई नयाँ अनि ताजा मन्ना हरेक विहान दिनु भएको थियो। तर कतिले चाहिं परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरेर एकदिनलाई भन्दा बढी बटुलेको लोभ गरेकोले तिनीहरुको मन्ना कुहिएको अनि गन्हाएको अनि किरा परेको थियो। किनकि परमेश्वरले हरेकलाई नयाँ र ताजा मन्ना दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। यहाँ यर्मियाले पनि विलापको पुस्तकमा भनेका छन्, “हरेक विहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। तपाईंको विश्वस्तता महान छन्।” विलाप ३:२३। “हरेक विहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। परमेश्वरको हरेक विहान अनि हरेक जनालाई नयाँ अनि ताजा तरिकाले उपलब्ध हुँदछ।
उहाँको विश्वस्तता महान छन्।
निश्चय पनि परमेश्वरको विश्वस्तता महान छन्। विश्वस्तता शब्द विश्वासबाट नै आएको हो। हाम्रो विश्वासको विश्वस्ततामा परमेश्वरप्रति अनि एक अर्काप्रति विश्वासयोग्य र विश्वस्तता बन्न सामर्थ्य प्रदान गर्दछ। परमेश्वरको प्रेम हामीप्रति अति नै महान छन्। उहाँको विश्वस्तता हामीप्रति अति नै महान छन्। यो विश्वस्तताको ह्रि्रु शब्द झगलबज जसको अर्थ अटल, पक्का, दृढ अनि स्थिर रहने भन्ने हुँदछ। त्यस्तै ग्रीक शब्द उष्कतष्क जसको अर्थ विश्वसनीय अनि भर्रपर्न सकिने भन्ने हुँदछ। परमेश्वरको विश्वस्तता महान छन. भन्ने कुरा उहाँ अटल अनि स्थिर हुनुहुन्छ। उहाँ विश्वसनीय र भरपर्दो हुनुहुन्छ भन्ने हो। विश्वस्सता भनेको भर पर्न सकिने अनि स्थिर रहन सक्ने परमेश्वरको चरित्र हो। यहाँ यर्मिया अगमवक्ताले परमेश्वरको विश्वस्तता महान छन् भन्ने कुरा बुझेर परमेश्वरप्रति आफ्ना आँखा उचालेका छन्।
के आज हामी भन्न सक्छौं कि तपाईको विश्वस्तता महान छन्? हो यर्मियाले भनेका छन् कि परमेश्वर तपाईको विश्वस्तता महान छन्। परमेश्वरको विश्स्तता महान छन् कि आज हामीले उहाँको विश्वस्ततामा रहन सकेका छौं? उहाँको विश्वस्तता अनुभव गर्न सकेका छौं? हामी अविश्वासयोग्य संसार र मानिसहरुको भीडमा बाँचीरहेका छौं। कतिचोटी हामी आफै पनि अविश्वासयोग्य भर पर्न नसकिने अनि अस्थिर जीवन जिईरहेका हुन्छौं। आज मानिसहरुले आफ्ना प्रतिज्ञाहरु सजिलै तोडदछन्। तिनीहरु विश्वासयोग्य स्थिर रहन सकेका छैनन। श्रीमान श्रीमतीहरुले आफ्ना वैवाहिक प्रतिज्ञाहरु तोडीरहेका छन्। तिनीहरु एक आपसमा विश्वासयोग्य बन्न सकेका छैनन्। तर परमेश्वर मानिसहरु जस्तो हुनुहुन्न। उहाँको विश्वस्तता महान छन्। परमेश्वर भर्रपर्न नसकिने हुनुहुन्न। उहाँले उहाँको प्रतिज्ञाहरु पुरा गर्नुहुन्छ। तपाईको सफलता अनि असफलता हरेक कुरामा परमेश्वर तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँको विश्वस्तता अति नै महान छन्। उहाँको विश्वस्तता अपरिपर्तनशील छन् अनि कहिल्यै पनि असफल हुँदैनन्। परमेश्वरको कृपाचाहिं सिमित छैन। परमेश्वरको कृपा र विश्वस्तता हाम्रो निम्ति परमेश्वरले हरेक दिन नयाँ नयाँ रुपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिऊन्।
« अन्तिम लेख . . .
पृथ्वीनारायण शाहले देश निकाला……. »